Mawduuca Kaliya ee Aad Waligaa Ugu Baahan Tahay WordPress: Avada | Martech Zone
Tuesday, April 17, 2018 Khamiista, Oktoobar 29, 2020 Douglas Karr
Muddo toban sano ah, shaqsiyan waxaan horumarinayay caado iyo daabacaadda daabacaadda, sixitaanka iyo qaabeynta mowduucyada caadada ah, iyo u habeynta WordPress macaamiisha. Waxay ahayd wax la duubo oo waxaan hayaa fikrado aad iyo aad u adag oo ku saabsan hirgelinta aan u qabtay shirkadaha waaweyn iyo kuwa yaryar.
Waxaan sidoo kale dhaleeceeyay oo kuwii ku dhisayna - plugins iyo mawduucyada awood u siiya wax ka beddelka aan xadidnayn ee goobaha. Iyagu waa khiyaano, inta badan si weyn u kordhinaya cabirka bogagga shabakadda iyadoo si tartiib tartiib ah u gaabineysa barta. Shaqooyinka ugu badan ee aan qabanno markaan qabanno shaqo horumarineed oo loogu talagalay macaamiisha ayaa meesha ka saaraya koodhka lahaanshaha iyo khadadka khadka tooska ah ee aan kaliya gaabineynin degel laakiin sidoo kale si ba'an u horjoogsanaya awoodda shirkadeed inay isbeddel ku sameyso boggeeda.
Ku soo dhawow Mawduucyada Jilicsan 'Avada
Mawduuca Fusion wuxuu si daacadnimo leh u dhisay mawduuca ugu fiican iyo iskudhafyada walxaha aan waligood la shaqeeyey # 1 mawduuca iibinta waqtiga oo dhan, Avada. Waxaa si daacadnimo leh loogu talagalay in aan u fuliyo mid kasta oo ka mid ah boggeyga iyo mid kasta oo ka mid ah macaamiishayda. Mid kasta oo ka mid ah walxaha dhismaha waxay u oggolaanayaan ugu yaraan qaabeynta - wax aad runtii rabto inaad xirto si aad uga fogaato macmiil ama tifaftire xad dhaaf ah u qaabeynta sumadda bogga iyo soo bandhigista dhibaatooyinka u baahan xitaa shaqo dheeri ah si loo tirtiro.
Waxay sidoo kale mawduuca ka dhigeen mid ka gooni ah fiilada, taasoo awood u siinaysa qof inuu si dhab ah u rakibo mawduuc cusub - iyadoo la ilaalinayo shaqeynta dhisitaanka qaab dhismeedka iyada oo loo marayo xirmooyinka fiilooyinka. The Mawduuca Avada waa xarrago, horumarsan, oo sahlan in laga shaqeeyo. Ku soo biir in ka badan 380,000 macaamiil ku qanacsan iibsashada mawduucan cajiibka ah!
Hubi Tusaalooyinka Avada
Our Highbridge Goobtu waxay ku taal Avada
Tan iyo markii aan dhisey goobta ugu horeysa ee Avada, waxaan u isticmaali jirey mawduucan dhammaan macaamiisheenna. Iyo, ugu dambeyntii waan cusbooneysiiyay kuweenna Highbridge sidoo kale goobta. Fiiri sida ay u qurux badan tahay - oo si aan caadi aheyn ayey u fududahay in la dhiso iyadoo si buuxda looga jawaabayay.
Naqshadeynta laga heli karo mawduucan waa kuwo aan dhammaad lahayn, oo leh boqollaal cunsur iyo karti uun ka dhigaya riyo ah in la hirgeliyo. Waxaan si gaar ah u jecelahay inaan keydin karo weelasha iyo walxaha dib loogu isticmaalo adduunka bogaga kale adoo adeegsanaya Fusion Builder. Waa nidaamka dhisaha bogga saxda ah ee soo saara qaabab faylka CSS-ku-dhex-dhexaadin ah oo goobta dhexdeeda ah halkii aad ka heli lahayd bogagga 'mega'.
Noocyada Dhismaha Fusion Includ
Iskudarka Jumlada horay loo dhisay - Halkii aad ku dari lahayd hal sadar markiiba, waxaad si fudud u dooran kartaa inaad ku darto jaangooyooyin buuxa oo cabbir kasta oo cabbir ah oo aan ka bixinno tiirarka 1-6.
Burburi Qaybaha iyo Kunteenarada - Ku burburi hal weel oo hal guji ah si aad u kaydiso shaashadda guryaha, ama u wada dumiyo dhammaan konteenarrada hal mar aagga baarka kontoroolka weyn.
Magaca Koonteenarada - Si fudud ku dul qor magacaaga weelka oo u bixi magac. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad si dhakhso leh oo fudud u aqoonsato qaybaha boggaaga adoo jaleecaya.
Jiid oo Dhig Cunnooyinka Ilmaha - Walxaha sida tabs, sanduuqyada wax lagu qoro, toggles iyo in ka badan oo u oggolaanaya in ka badan hal cunsur in la sameeyo ayaa hadda si fudud dib loogula xidhi karaa adoo jiidaya oo dhacaya.
Magacyada Gaarka ah ee Cunnooyinka Ilmaha - Isku xidhka cusub ee 'Fusion Builder' wuxuu soo qaadanayaa cinwaanka weyn ee cunugga aad gelisay wuxuuna u soo bandhigayaa aqoonsi fudud.
Raadinta Waxqabadka si fudud ugu hel alaabta iyo walxaha - Weel kasta, tiir, iyo daaqadda walxaha waxay ku leeyihiin goob raadinta ee midigta sare si ay si fudud ugu raadiso una hesho waxa aad ugu baahan tahay hal eray oo keliya.
Iibso Mawduuca Avada Hada
Waa nidaam qurux badan. Waa kuwan taxanaha astaamaha muhiimka ah ee Avada:
Shaacinta: Waxaan ku faraxsanahay xulufada Themeforest halka ay Mawduuca Avada waa la iibiyay.
Tags: awadaugu fiican wordpress themeisugadhisaha iskudhafkamawduuc isku dhafanbogga dhisathemeiskudhafka mawduucaWordPresstheme word
Sida Loo Kordhiyo Ka Qeybgalka Warbaahinta Bulshada